အမေရိကရှိဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေး | သတင်းအချက်အလက် & USAHello ထံမှအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
ဘယ်လိုပြန်လည်နေရာချထားရေးအမေရိကားအလုပ်အတွက်မ? သင် USA တွင်ဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အခါဘာဖွစျ? ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ် USA တွင်ရောက်ရှိလာအကြောင်းကိုလေ့လာပါနှင့်သင် America မှာဘဝအကြောင်းကိုနားလည်ကူညီပေးပါမည်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေ.
သင်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိသည့်အခါ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီထံမှစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကလေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြလိမ့်မည်. သူတို့ကသင့်ရဲ့အသစ်ကအိမ်ပြန်ရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်. သာသင်ကကူညီပေးနေကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကိုသငျသညျအသကျရှငျဖို့နေရာရှာတွေ့မှပိုက်ဆံ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်သင့်အိမ်သေးသေးတိုက်ခန်းဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ကိုယ်ကသာအထဲတွင်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိစေခြင်းငှါ. အမေရိကန်မိသားစုများဖြစ်ကောင်းအိမ်ထောင်စုပစ္စည်းများလှူဒါန်းခဲ့, ထိုကဲ့သို့သောအိပ်ရာနှင့်စားပွဲအဖြစ်, သင့်ရဲ့တိုက်ခန်းများအတွက်.
သင်သည်သင်၏တိုက်ခန်းသစ်ကိုပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်ဥပမာ -, သင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာ, မိုက်ခရိုဝေ့နှင့်အဝတ်လျှော်စက်. သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအစာကိုကွဲပြားခြားနားကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင်လုပ်နိုင်သည် အစားအသောက်နှင့်စားအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ USA တွင်.
သငျသညျရောက်လာပြီးနောက်, သင်တစ်ဦးအမှုတွဲကိုင်ဖို့တာဝန်ပါလိမ့်မည်. ဤပုဂ္ဂိုလ်ကို USA မှ adjust သင်ကူညီကြလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့အမှုတွဲကိုင်ဖြစ်ကောင်းသည်အခြားမိသားစုများကူညီပေးနေအလွန်အလုပ်များပါလိမ့်မည်, လွန်း. သင့်ရဲ့အမှုတွဲကိုင်ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေး၏များစွာသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရမယ်. သင့်ရဲ့အမှုတွဲကိုင်နှငျ့ဆကျဆံရေးကောငျးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အရေးကြီးသောကြောင့်.
သငျသညျစာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. သငျသညျပိုက်ဆံလက်ခံရရှိရန်အဘို့ဤစာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ပါသည်. သငျသညျတှငျနထေိုငျသောအရာကိုပြည်နယ်ပေါ်မူတည်ပြီး, သင်သည်သင်၏မိသားစုများအတွက်ပိုက်ဆံ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလကျခံရဦးမည်. ဤသည်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာငွေကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကိုခေါ်စေခြင်းငှါဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲသားတွေကိုမိသားစုများအတွက်ယာယီကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကိုခေါ်စေခြင်းငှါ. သငျသညျဖြစ်ကောင်းလည်း "အစာတံဆိပ်ခေါင်းများ" ဟုခေါ်ရာတစ်ခုခုကိုခံယူသို့မဟုတ် SNAP ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာအစားအသောက်ဆိုင်အဘို့အပေးဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သင်ကအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် သငျသညျလကျခံစေခြင်းငှါ, အကြိုးခံစားခှငျ့ လည်းပဲ အထူးသဖြင့်ဒုက္ခသည်များအတွက်အများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်.
သင့်မိသားစုအတွက်လူတိုင်းဆေးပညာဆိုင်ရာစာမေးပွဲရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်. သငျသညျအမရေိဆီသို့ရောက် လာ. , မီဖြစ်ကောင်းတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့. သင်နှင့်သင့်ကလေးတွေကာကွယ်ဆေးထိုးရောဂါများရတဲ့ထံမှသင်တို့တားဆီးဖို့ရှိစေခြင်းငှါ. သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် USA တွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု. သင်တစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုပြဿနာရှိပါက, သင် USA တွင်ဖြစ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးရှစ်လအတွင်းဆရာဝန်တစ်ဦးမြင်ရပါလိမ့်မယ်, သငျသညျကောငျးမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံရှိသည်ကြောင့်.
သငျသညျသားသမီးရှိပါက, သငျသညျကြောငျးတှငျသူတို့ကိုစာရင်းသွင်းရမယ်. သင်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖတ်နိုင် အများပြည်သူကျောင်းများ အမေရိကန်ကျောင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်. အများစုမှာပြည်နယ်ကလေးများအသက်အရွယ်လိုအပ်5သို့ 18 ကျောင်းတက်ဖို့.
သင်အလိုရှိစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်လိုအပ်, မူကြိုမှငယ်ရွယ်သောကလေးများပေးပို့ဖို့. ကြောငျးအတှကျလည်းနုပျိုနေသောသားသမီးတို့အဘို့ HeadStart ဟုခေါ်တွင်အခမဲ့အစီအစဉ်များနှင့်အစောပိုင်း Headstart လည်းရှိပါတယ်.
သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီနှင့်အမှုမန်နေဂျာကသင်တစ်ဦးအလုပ်ရကူညီပေးပါမည်. ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်, သင်သည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေါ်တွင် entry ကိုတံဆိပ်ခေါင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံချက်ချင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်နိုင်ပါသည်. အမေရိကန်ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်၏ရည်မှန်းချက်သည် "Self-ဖူလုံရေး။ " ဒီအစိုးရသငျသညျအဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်အလုပ်ရရန်လိုလားဆိုလိုတယ်. သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်သည်ပူဇော်ကြသည်ကိုပထမဦးဆုံးအလုပ်ယူရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင်ဤအလုပ်ရှိချင်မပြုစေခြင်းငှါ. သငျသညျပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အရှာနေစောင့်ရှောက်နိုင်သောမှတ်မိဖို့အရေးကြီးသောကြောင့်. သင်လုပ်နိုင်သည် အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေတာသို့မဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရတဲ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ.
သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးလျှောက်ထားရန်ရှိသည် လူမှုဖူလုံရေးကိုယ်ပိုင်နံပါတ်. သင့်ရဲ့အမှုတွဲကိုင်ဖြစ်ကောင်းသင်သည်ဤအမှုကိုကူညီပေးပါမည်. ဤသည်ကိုပြသသင် USA တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မယ့်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအလုပ်မလုပ်သောအခါ,, သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအချို့လူမှုလုံခြုံရေးများအတွက်အခွန်များနှင့်အချို့သောအဖြစ်သင့်လစာထဲကယူတတ်၏.
သင်ကဘတ်စ်ကားယူဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ် ဘယ်လိုမောင်းထုတ်ရန်. US မှာ, သင်တစ်ဦးစမ်းသပ် pass နဲ့မောင်းနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိရပါမည်. သင်တို့သည်လည်းသင့်ကားများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်, သင့်ကားများအတွက်အာမခံ, နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ကုန်ကျစရိတ်.
သငျသညျအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူအာရုံစိုက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်. ဒါကဖြစ်ကောင်းသင်သည်သင်၏မိသားစုအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးဖို့လုပျနိုငျအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီဖြစ်ကောင်းအင်္ဂလိပ်အတန်းဘို့သင့်ကို sign up ကိုဦးမည်. သင်တို့သည်လည်းယူနိုင်ပါသည် အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာအတန်း သို့မဟုတ်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းရှိအခြားသောအရပ်တို့ကိုမမှာအတန်းကိုရှာဖွေ. ဒါဟာသင့်ရဲ့လေးတွေကသင်၏မိခင်ဘာသာစကားကိုသင်ယူကူညီရန်ကြိုးစားရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်.
ဤအချိန်အပေါငျးတို့သစဉ်အတွင်း, သင်သည်လည်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တတ်ဖို့သင်ယူပါလိမ့်မည် အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု. သငျသညျရင်ဆိုင်ရစေခြင်းငှါ ယဉ်ကျေးမှုထိတ်လန့်. သင်သတိရကြောင်းယဉ်ကျေးမှုအဖိုးတန်သည်နှင့်သင် United States ကိုသင်နှင့်အတူပိုင်ဆိုင်မှုအများကြီးယူဆောင်လာသည်ဟုအရေးကြီးသောကြောင့်. သင်သည်သင်၏ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုအမေရိကန်တွေသင်ပေးကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
သငျသညျကိုအမေရိကန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီတစ်နှစ်အကြာတွင်, သငျသညျအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် (တစ်ဦး အစိမ်းရောင်ကဒ်). သင့်ရဲ့အမှုတွဲကိုင်ဖြစ်ကောင်းသင်လျှောက်ထားကူညီပေးပါမည်.
ပထမနှစ်တွင်ပြီးနောက်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင့်အမှုအလုပ်သမားကိုမြင်လျှင်ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမဲ့, US မှာသငျသညျကိုကူညီနိုငျသောအခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူမျိုး၏စာရေးနေတုန်းပဲရှိပါတယ်. သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အစီအစဉ်များကိုရှာဖွေရာတွင်အကူအညီလိုပါလျှင်, သင်၌ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် FindHello သငျသညျအနီးအရင်းအမြစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတွေ့ရှိရန်.
တခါတလေ, ဒုက္ခသည်တွေသူတို့အခြေချခဲ့ကြသည့်မြို့မကြိုက်ဘူးသူတို့အသစ်တစ်ခုကိုမြို့ပြောင်းရွှေ့ချင်ဆုံးဖြတ်. သငျသညျမိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများပိုမိုနီးကပ်စွာသို့မဟုတ်တစ်နေရာရာကောင်းတစ်ဦးအလုပ်အတူရွှေ့နိုင်လျှင်ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိစေနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်လည်းအလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သငျသညျကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာသင်သိရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သင်သည်သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်ရှိသည်. သငျသညျသစ်တစ်ခုအရပျသို့ရွေ့လျားစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖတ်ပါ အသစ်တစ်ခုကိုမြို့ပြောင်းရွှေ့ သငျသညျအပြောင်းအရွေ့မတိုင်မီ.
အထက်တန်းပြီးအောင်နှင့် GED ဝင်ငွေ ဒီပလိုမာလက်မှတ်
သင့်ရဲ့ပထမနှစ်တွင်ပြီးနောက်, ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့နိုင်ရန်အတွက်, သင်သည်လည်းသင်၏အပညာရေးပြီးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်, သင်သည်သင်၏နိုင်ငံအတွင်းရှိအထက်တန်းကျောင်းပြီးအောင်မပြုခဲ့အထူးသဖြင့်လျှင်. ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ဝင်ငွေကိုကူညီမယ့်အခမဲ့အွန်လိုင်းလူတန်းစားများ အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာ. သင်တို့သည်လည်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် ကောလိပ်နှင့်အခြားပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ USA တွင်.
သငျသညျကိုလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံအခြားမိသားစုဝင်များရောက်စေဖို့လျှောက်ထားရန်လိုပေမည်. ယေဘူယျအားဖြင့်, သင်ပထမဦးဆုံးနှစ်နှစ်အတွင်းဒီလိုလုပ်ဖို့လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့လာ. မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး Read သို့မဟုတ်ကအကြောင်းသင့်ရဲ့အမှုတွဲကိုင်ရန်ပြောဆို.
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ UNHCR က နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.